बन्द गर सत्ताको ह्याङओभर ! - Dainikee News::
बन्द गर सत्ताको ह्याङओभर !
जनताको नाममा गएको अनुदानको लाखौ रकम चप्काउनेले सत्ताको गफ लाउँदै पत्रकारलाई तलमाथि गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
ललितपुर जिल्ला बाग्मती गाउँपालिका वार्ड नम्बर ७ का तत्कालिन एमाले (अहिले गाउँ कमिटिमा एकता नभइसकेकोले) का नेता तथा बागमती देउता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर लामिछानेले दैनिकीन्यूजका सम्पादकलाई ज्यान नै तलमाथि पारिदिने चेतावनी दिएपछि दैनिकीन्यूजको विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रकाशित भएको समाचारलाई आधार मानेर उनले तथानाम गाली मात्रै गरेनन्, एकदमै तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग पनि गरे । प्रकाशित भएको समाचारको प्रतिक्रिया वा खण्डन लेखाउन पाउने अधिकार हुँदा हुँदै लामिछानेले फोन गरेर ज्यान तलमाथि पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिएपछि दैनिकीन्यूजले हाम्रा पाठकहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने सोचेर यो सम्पादकीय लेखिएको हो ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अनुदान रकममा लामिछानेले जिरो इनर्जी मेसिन लगेका थिए । तर, प्यूटार र गिम्दीमा लगिएको उक्त मेसिनले अहिलेसम्म काम नै नगरेको, वेवारिसे देखिएपछि दैनिकीन्यूजले सबै प्रमाण जुटाएर समाचार लेखेको थियो ।
अहिलेको स्थिर सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रले जनताका कामहरु गर्नुपर्छ, अहिलेपनि जनतालाई झुक्याउने, भ्रष्टाचार गर्न दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
जनताका नाममा मेसिन लगेर अलपत्र पारेको स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएपछि हामीले सप्रमाण समाचार प्रकाशित गरेका थियौं । तर, उक्त समाचारलाई आधार मानेर निज लामिछानेले तथानाम गाली मात्रै गरेनन्, जुनबेला जे पनि गरिदिन सक्ने चुनौति दिए ।
उनले आफू एमालेको गाउँ कमिटि अध्यक्ष भएको बताए । उनको यो डुक्राई सुन्दा सरकारमा रहेको दुईतिहाइको दम्भ गाउँ गाउँ पनि पुगिसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्, अनि उनकै पार्टीका गाउँ कमिटीका अध्यक्षहरु खुलेआम जनतालाई लुट्छन र समाचार लेख्नेलाई जे पनि गर्न सक्ने भनेर च्यालेन्ज गर्छन । नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको अधिनायकवाद गाउँ गाउँ पनि पसिसकेको होकि भन्ने भान पर्न थालेको छ ।
समाचारमामा हामीले प्रमाण बाहेकका कुरा केही लेखेका छैनौ, किर्ते काम गर्ने, चापागाउँ बसेर बिल मिलाउने अनि नचल्ने मेसिन लगेर जनताको नाममा गएको रकमलाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरामा हाम्रो चासो र निगरानी हो । समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न धम्की दिने कुराले सिंगो पत्रकारितालाई लोकतन्त्रमा कस्तो बनाउन खोजिदैँछ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
शुक्रबार यसै विषयमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थसँग पनि कुरा भएको छ, हेरौ उनले कस्तो कदम चाल्नेछन् । तर,अनियमितता गर्ने अनि पत्रकारलाई धम्की दिनेलाई कानुनी कारवाही प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
अन्त्यमा सत्ताको उन्मादमा आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न पत्रकार धम्काउने क्रियाकलाप बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं ।
ललितपुरमा कृषिको बजेट दुरुपयोग, विना टेण्डर करोडौको सामान खरिद
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५ /Friday, July 13th, 2018, 8:56 pm